Madaxweyne Deni oo kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaxweyne Deni oo kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka.
Madaxweynaha Dowladd goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta hab maqal iyo muuqaal ah kulan kula yeeshay Wakiilada Beesha Caalamka u qaabilsan Soomaaliya oo uu hoggaaminayo ergayga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya James Swan.
Masuuliyiintu waxay isla soo qaadeen sida ay ahmiyada weyn u leedahay in wada hadal lagu dhameeyo is marin waaga ka taagan Arimaha Doorashooyinka taas oo ah xalka ugu haboon ee laga gudbi karo waqtigan kala guurka a
Previous Maxaa looga hadlay Shirka Golaha Wasiirada Soomaaliya?
Next DFS oo sheegtay in saraakiil iyo askar loo xiray weerarkii lagu dilay guddoomiyihii degmada Hodan